Bogga ugu weyn Products DataNumen Word Repair Faylasha Wadahadalka Beddelka ayaa soo ifbaxaya marka la furayo Dukumiinti Eray Khaldan
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan Ciladda Faylasha Wadahadalka Faylasha marka la furayo Dukumiinti Eray Musuqmaasuq ah
Markaad ku furayso dukumiinti erey ah oo dhaawacan Microsoft Word, wada hadalada “Faylka badalashada” ayaa soo bixi doona waxayna ku weydiin doonaan inaad doorato habaynaya ka dhigaya dukumiintigaaga mid la aqrin karo:
Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo aad codeyso oo aad doorato, waxyaabaha asalka u ah dukumintiga waligood dib looma soo celin doono.
Marka macluumaadka koodhka ah ee dukumintiga Ereygu musuqmaasuq ama lost, Word ma awoodi doono inuu qeexo waxyaabaha ku jira dukumintiga. Markaa waxay soo bixi doontaa wadahadalka feyl-celinta oo wayddiineysaa habka saxda ah. Musuqmaasuqa qaabdhismeedka feylasha iyo waxyaabaha kale awgood, xitaa haddii aad doorato habka saxda ah, ereyga wali ma awoodo inuu si sax ah u caddeeyo waxyaabaha ku jira, taasoo ka dhigeysa dukumiinti aan la aqrin karin oo aan waxtar lahayn. Xaaladda noocaas ah, waad isticmaali kartaa badeecadeena DataNumen Word Repair si loo hagaajiyo dukumiintiga ereyga loona xalliyo qaladkan.
Muunad fayl dukumiinti ah oo musuqmaasuq ah oo sababi doona qaladka. Cilad7_1.doc
Faylka ayaa lagu hagaajiyay DataNumen Word Repair: Cilad7_1_fixed.doc